दिल्लीलाई ‘कम्फर्टेबल’ नभएपछि मलाई महासचिवबाट हटाइयो - हाम्रो देश
मसँगै एउटै सेल्टरमा सँगै सुतेका साथी बिहान अन्यत्रै गइसकेका हुन्थे । त्यस्ता घटनाहरू खेपे÷भोगेकाले मलाई मार्छन्, भाग भनेर कतिले भनेका थिए । तर, मैले सुनिनँ । मैले सँगै बसेका साथी कति मारिए, के भए भन्ने सन्देश जोगाउनुप¥यो, फैलाउनुप¥यो । कसले गर्छ ? मरे पनि मैले विश्वासघात गर्नुहुन्न भनेर म बसेँ ।
छलफलपछि त्यो प्रस्ताव पास पनि भयो । उहाँहरू त्यहाँबाट निस्केर रूपन्देहीको गाउँतिर जानुभयो । फर्केर आउँदा उहाँहरूले बाटोमा मोहनविक्रम सिंहको पर्चा पाउनुभएछ– जनमत सङ्ग्रह धोका हो, बहिष्कार गरौँ भन्ने । उहाँहरू त्यसमा कन्भिन्स पनि हुनुभएछ । दुई घण्टा कुरा गर्यौँ । मसालजस्तो दक्षिणपन्थीले त बहिष्कार गर्छ भने हामीले किन नगर्ने भन्ने उहाँहरूको भनाइ रह्यो । मेरो कुरै मानेनन् । अल्पमत भएपछि मैले त्यो मान्नैप¥यो । त्यसबेला मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखिनँ ।
यस्तो स्थितिमा हामीले जनमत संग्रह बहिष्कार अभियान सुरु ग¥यौँ । तर, बहिष्कारपछि मण्डलेहरूले बहुदलवादीहरूको विरुद्धमा मालेलाई प्रयोग गरे । यो कुरा सच्याउँदै जाँदा ०३६ साल माघ÷फागुनतिर ५ शर्तका आधारमा जनमत सङ्ग्रहलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा मालेलाई एकमतमा पु¥याएँ ।
केही समयअघि लकडाउनको बेला एकजना एमालेजनको एउटा लेख आयो । त्यसबेला सीपी मैनालीले दिएको राजीनामाको शब्द मदन भण्डारीले पचाउन नसकेकाले कारबाही गरेर हटाएको हो भनेर लेखेका छन् । मलाई त्यसले ‘स्ट्राइक’ ग¥योे । त्यसअघि मैले धेरै कुरा खेलाएको थिइनँ । मदन भण्डारीलाई म अलि सुसंस्कृत मान्छे नै मान्थेँ । तर, उनी षड्यन्त्रमा संलग्न भएको भन्ने कुरा मैले त्यो दिन (२०३९ कात्तिक) लाई सम्झेँ ।
यता माधवजीहरू झुकेर नजाने भन्नेमा छन् । अलग्गै पार्टी खोल्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । कि चुनाव घोषणा भइसकेपछि ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी खोल्न सक्छन्् । तर, खोलेर पार्टी चलाउँछन् भन्ने म देख्दिनँ । दुईवटैले जबज भन्छन् । हिजो वामदेव र एमाले जबज भन्थे, वामदेव हारेर फर्के । फेरि दुईवटै जबज भन्ने हो भने पार्टी चल्दैन । माधवको वैकल्पिक दृष्टिकोण पनि छैन । खुद्राखाद्री विरोधबाहेक नयाँपन केही पनि छैन । त्यसरी चलाउने आधार र ह्याउ पनि देखिँदैन । कि त उहाँ प्रचण्डसँग जानुप¥यो ।
माओवादीले २०५२ सालमा आन्दोलन सुरु ग¥यो, अहिले जनगणतन्त्र छैन, बुर्जवा गणतन्त्र छ । १७ हजार मान्छे मरे, अर्बौंको खती भयो, लाखौँले दुःख पाए । फर्केर आउँदा विदेशीको एजेन्डा बोकेर आए । फाइदाभन्दा नोक्सान बढी भएको छ । तर, पनि आत्मालोचना गर्दैनन् । के यो कम्युनिस्ट तरिका हो ? सुरुमा गल्ती भयो होला, हामीले पनि त्यस्तै ग¥यौँ । तर, हामीले गल्ती देखिएपछि स्वीकार ग¥यौँ । जनगणतन्त्रको कार्यनीति गलत थियो, तर पञ्चायतविरुद्ध लड्नु ठीक थियो । हिंसाको गर्भमा उभिएको पञ्चायतविरुद्ध लड्दा हामीले के बिगा¥यौँ ? तर, जनगणतन्त्र त्यसबेला पनि हाम्रो लक्ष्य बन्न सक्दैनथ्यो । ०५२ सालमा पनि त्यो शक्ति बदलिन्थ्यो । यत्रो भएर पनि आएन नि भनेर । अहिले त्यो नआएकाले एक त माओवादी पार्टी चिराचिरा भयो । ०५२ सालमा हामीले त्यस्तो कार्यनीति लिनु नहुने रहेछ भनेर प्रचण्डले भनेको भए माओवादी फुट्ने थिएन ।